October 2014 ~ SAI SENG SERK
သုံးနှစ်ထက်ကြာပြီး သန္စောတားဆေးမှီဝဲသည့် အမျိုးသမီးများ
သုံးနှစ်ထက်ကြာပြီး သန္စောတားဆေးမှီဝဲသည့် အမျိုးသမီးများ မျက်စိကွယ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆခန့်မြင့်မား
သန္ဓေတားဆေးကို သုံးနှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ မှီဝဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ မျက်စိပြဿနာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆခန့်မြင့်မားတယ်လို့ လေ့လာမှုအရ တွေ့ရှိထားပါတယ်။သန္ဓေတားဆေးမှီဝဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မျက်စိရေတိမ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတယ်လို့သူတေသီတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေတိမ်ရောဂါဟာ မျက်စိအတွင်းရေဆင်းတဲ့ ပိုက် ပတ်ဆို့မှုဖြစ်ခဲ့ရင် ရေစီးဆင်းမှု မရှိတော့တဲ့အတွက် မျက်လုံးအတွင်း ဖိအားများလာကာ မြင်လွှာမှ အာရုံကြောနဲ့ မျက်စိအာရုံကြော ပျက်စီးတာကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဒီလေ့လာမှု အသစ်ဟာ ပါးစပ်မှ မှီဝဲရတဲ့ သန္ဓေတားဆေးကိုအသုံးပြုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရေတိမ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ များတာကို ပထမဆုံးတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ပါးစပ်မှ မှီဝဲရတဲ့ သန္ဓေတားဆေးဟာ ရေတိမ်ရောဂါ ဖြစ်ဖို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပေမယ့်ဒီသန္ဓေတားဆေးကို ရေရှည်အသုံးပြုပါက ရေတိမ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားတာကိုညွှန်ပြနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရေတိမ်ရောဂါကို မျက်စဉ်းဆေးခတ်တာ၊ လေဆာကုထုံးအသုံးပြုတာဒါမှမဟုတ်ခွဲစိတ်နည်းလမ်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါရှိမှန်း စောစောစီးစီးသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မျက်လုံးတွင်းပျက်စီးမှု ဖြစ်လာရင် ပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တာကြောင့်ပါ။ ရေတိမ်ရောဂါကို မကုသဘဲ ထားခဲ့ရင် အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
Get >>> Good Health
နေ့စဉ် နံနက်ခင်း အိပ်ယာထထချင်း ရေကိုသောက်ပေးသော အလေ့အထသည် ယနေ့ဂျပန်ပြည်တွင် အလွန်ခေတ်စားနေသော ကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်နေပါသည်။သိပ္ပံပညာရှင်အများကလည်း နံနက်ခင်းအိပ်ယာထခါစမှာ ရေသောက်ခြင်း၏ကောင်းကျိုးများနှင့် ပျောက်ကင်းစေနိုင်သော ရောဂါများ၊ ကာကွယ်ပေးနိုင်သောရောဂါများကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့ကြပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၂၅၀၀ ကျော်ကတည်းက မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်း ရေ၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးပြုပုံများကိုမဟာဝဂ္ဂပါဠိတော်ထဲမှာ ဟောကြားထားခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့် ရေသည် သောက်တတ်လျှင် အသက်ကယ်ဆေး၊ အသက်ရှည်ဆေး ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် ရေဓါတ်တို့ဖြင့် အများဆုံးတည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ရေသည် လူ့ကျန်းမရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်နေသော အရာတစ်ခုဖြစ်နေပါသည်။ရေကို ဆေးအဖြစ်သောက်သုံးရန်နည်းလမ်း-
၁။ မနက်အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း သွားမတိုက်ခင်တွင် ရေ တစ်လီတာဘူးကြီး
တစ်ဘူးခန့် (သို့မဟုတ်) သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် သောက်ပါ။
၂။ ပြီးနောက် သွားနှင့်ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။ ရေသောက်ပြီး (၄၅) မိနစ် အတွင်း မည်သည့်အစာကိုမျှ မစားပါနှင့်။
၃။ (၄၅) မိနစ်ကျော်ပြီးလျှင် နဂိုစားနေကျပုံစံအတိုင်း မနက်စာကိုစားနိုင်ပါပြီ။
၄။ မနက်စာ၊ နေ့လည်စာနှင့် ညစာ စားပြီးနောက်ပိုင်း (၂) နာရီအတွင်း မည်သည့်အစာနှင့်ရေကိုမျှ မသောက်ရ မစားရပါ။
၅။ အသက်ကြီးသူများနှင့် မကျန်းမာသူများဆိုလျှင် သောက်နိုင်သည့်ရေ ပမာဏမှစ၍ သတ်မှတ်ထားသောရေပမာဏထိ လေ့ကျင့်သောက်ပေးပါ။
ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပြီး ရောဂါဖြစ်နေသူကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပါ၏။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ၊ ဦးနှောက်အမြေးရောင်ရောဂါ၊ အန်ခြင်း၊ မျက်စိရောဂါအမျိုးမျိုး၊ နား နှာခေါင်း လည်ချောင်းရောဂါများ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ တီဘီရောဂါ၊ အဝလွန်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အစာအိမ်နာရောဂါ၊
ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါနှင့် အမျိုးသမီးများ ရာသီလာမမှန်ခြင်းတို့ဖြစ်၏။
ရေကုထုံးတွင် ရေနွေး(သို့မဟုတ်) ရေခပ်နွေးနွေးနှင့် ရေသန့်ကိုသာ သုံးသင့်၏။ ညသိပ်ရေနွေးနှင့် ဓါတ်ဗူးထဲတွင် (၆) နာရီကျော်အောင် သိပ်ထားသော ရေနွေးသည် အဆိပ်ထက်ပြင်းသည်ကိုလည်း သိထားရန်လိုအပ်၏။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားချိန်တွင် ရှောင်ရှားရမည့် အန္တရာယ်များကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေသောအဆိပ်အတောက်များခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပါကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သာ ထိခိုက်စေသည်မဟုတ်ဘဲ ကလေးငယ်၏ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိသည်။ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဆံကေသာတို့ကို အဆိပ်အတောက်ပါသော ထုတ်ကုန်များသုံး၍ ကုသမှုစစ်ယူပါမိစေရန် အရေးကြီးသည်။ လက်သည်းဖျက်ဆေးအများစုတွင် ကိုယ်အင်္ဂါများ၊ အာရုံကြောစနစ်များကို ပျက်စီးစေနိုင်သော၊ဟိုမုန်းထုတ်လွှတ်မှုကို အနှောင့်ယှက်ဖြစ်စေသော၊ ကင်ဆာဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများစွာ ပါဝင်သည်။ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်းမှာလည်း သွေးကင်ဆာ၊ ဆီးအိတ်ကင်ဆာတို့ နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပြင်းထန်သော မည်သည့်ဓာတုပစ္စည်းကိုမှ မသုံးသင့်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်းကြောင့် ကလေး၏ ကျန်းမာရေး ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်သည်။အကယ်၍ ဆံပင်ဆိုးမှဖြစ်မည်ဆိုပါက ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်သည့် ပထမသုံးလပတ်ကာလကို ရှောင်၍ ဆေးဆိုးခြင်းမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။မိတ်ကပ်၊ ပေါင်ဒါ၊ ဆပ်ပြာနှင့် ရှန်ပူ၊သွားတိုက်ဆေး၊ဗိုက်သားလိမ်းသောခရင်မ်များ အပါအ၀င် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတို့ကိုဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ပါ။ သဘာဝထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသာ သုံးပါ။ အနံ့များတွင်လည်းဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်နိုင်သည်။အစားအသောက်များဝယ်ယူရာတွင် ပြန်လည်ပြုပြင်ထားခြင်း မရှိသော ဆန်၊ ဂျုံ၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ သစ်သီးများ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ပရိုတိန်းနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ ရွေးဝယ်ပါ။ လတ်ဆတ်သော ဆေးဖက်ဝင်အရွက်များနှင့်ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များကို ရွေးဝယ်ပါ။ဓာတုပစ္စည်းများပါဝင် စည်သွတ်အစားအစာများကို မ၀ယ်ပါနှင့်။ သဘာဝအစားအစာများများမှာ ပို၍အာဟာရဖြစ်စေသည်။ အကယ်၍ သန္ဓေထားနှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများထဲ တွေးမိပါက ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ မှတ်ဉာဏ်၊ သင်ယူနိုင်မှု ပြဿနာနှင့်အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပေါ် ရေရှည်ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲရာတွင်သတိရှိပါ။အစားအစာကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ခြင်းမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။အခြားသောဓာတုပစ္စည်းများကြောင့်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ကလေးငယ်မွေးဖွားလာချိန် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းစသော အန္တရာယ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။
လက်မထပ်ခင် ဆေးစစ်ခြင်းနှင့် ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသင့်သည့်အရာများ
မကြာခင်အချိန်လေးအတွင်းမှာ ပင် မိုးလေကင်းပြီး ဝါကျွတ်ချိန်ခါသမယ ဝါကျွတ်ပွဲတော် ဆိုက်ရောက်လာတော့ မည်ဖြစ်သည်။ ဝါကျွတ်ပြီး သည်နှင့်တစ် ပြိုင်နက် မြန်မာ တို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာအရလက်ထပ်ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုကို နေရာတိုင်း ဒေသ၊ ကျေးရွာမကျန်ပြုကြ၊ ဆောင်ကြ တော့မည်လည်း ဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာ ဆောင်ခြင်းအမှုက ဘဝတစ်ခုလုံးကို ထု ဆစ်ပုံဖော်ရာတွင် အင်မတန်မှ အရေးကြီးလှသောကြောင့် အထူးဂရုပြု၊ အလေး ထားဆောင်ရွက်တတ်ရန်လည်း အရေး ကြီးလှပေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် လက်ထပ်တော့မည်ဟု ပြင်ဆင်နေသည့် လူငယ်၊ လူရွယ်၊ လူလတ်များအနေဖြင့် ရင်ခုန်ရခြင်း တစ်ဖက်၊ ပင်ပန်းရခြင်းတစ်ဖက်နှင့်အတူတချို့အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်သင့်သည့်အရာများကိုလွဲ ချော်သွား နိုင်ပေရာ မည်သည့်အရာကို မျှ အလောတကြီး မပြုလုပ်သင့်ပေ။ မင်္ဂ လာဝတ်စုံအပ်နှံခြင်း၊ ဖိတ်စာပြုလုပ် ခြင်း၊ မင်္ဂလာခန်းမငှားခြင်း စသည်တို့ကို အလောတကြီးပြုလုပ်လျှင် တစ်သက် မှာတစ်ခါဆောင်ဖြစ်သည့် မင်္ဂလာပွဲကို ကျေနပ်အားရမှု မရှိဘဲ အလိုမကျမှုများစွာနှင့် တစ်သက် လုံးနောင်တရသွား စေမည်ဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းကိုအချိန်ယူပြီးစနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှသာမင်္ဂလာအချိန်မှာသာမကဘဲမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်းနှစ် ကိုယ်တူတစ်ဘဝထူထောင်ချိန်၌လည်းစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝဖြင့်တစ်သက်လုံးပြုံးပျော်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများက အကောင်းဆုံးဖြစ်ေ အာင် မည်သို့ပင်စီစဉ်ပေး၊ကြီးကြပ်ပေးစေကာမူဘဝတစ်ခုလုံးသာယာစေရေးအတွက်မူ မင်္ဂလာ သတို့သား၊ သတို့သမီး၏ ကျန်းမာရေး အပေါ်တွင် အဓိကမူတည် လျက်ရှိရာ အဓိကအနေဖြင့် လက်မထပ်ခင် နှစ်ဦးစလုံးဆေးစစ်ခြင်းပြုလုပ်ရပေမည်။ ဆေးစစ်ရာတွင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါရှိ မရှိ၊ မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည့် ရောဂါရှိမရှိ ဆိုသည်ကို ဦးစွာ စစ်ဆေးခံသင့်သည်။
ဆေးစစ်ကြည့်၍ ဥပမာ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါမျိုးတွေ့ရှိ ခဲ့လျင် ပျောက်ကင်းအောင်ကုသပြီးမှလက်ထပ်ယူသင့်သည်။ ဆေးမစစ်ဘဲလက်ထပ်ယူပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြလျှင် နောင်တစ်ချိန်၌ အိမ်ထောင်ရေးသုခကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတတ်သော ကြောင့် ဆေးစစ်ခြင်းဖြင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ခံယူ လိုက်နာဆောင် ရွက်သင့်ပေသည်။ နောက်တစ်ခုက သားသမီးရယူရေး ပင်ဖြစ်သည်။ အိမ် ထောင်သားမွေးဆိုသည့်စကားအတိုင်းအိမ်ထောင်ပြုပြီးလျှင်ကလေးယူခြင်းက နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် ကပ်ပါလာခဲ့ သည်။ ချက်ချင်း ကလေးမယူချင်သေး လျှင် ကာကွယ်တားဆီးဖို့နှင့် ကလေးယူ မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားလျှင် ရှောင်သင့်၊ ဆောင်သင့်သည့်အချက်များကို ဆရာ ဝန်နှင့် ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားပါက ပို ကောင်းပေလိမ့်မည်။အထူးသဖြင့်ဆရာဝန်အများစုကသတို့သမီးအသက်၂၅ နှစ်ကျော်လွန်နေလျှင် မြန်မြန် ကလေး ယူဖို့ တိုက်တွန်းလေ့ရှိတတ်ကြသည်။ ထို့အပြင် သားသမီးဟုဆိုရာ၌ ယနေ့ ခေတ်ကာလ အခြေအနေအရ အလုပ် အကိုင်အခွင့် အလမ်းအဆင်မပြေမှုပိုများသောကြောင့်သားသမီးများများယူ ရေးကို အများစုက ရှောင်ကြဉ်တတ်ကြ သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကလေးယူ သည့်အခါ၌ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးအနည်း ဆုံး သုံးနှစ်လောက်ခြားပြီး ယူပါက အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။တစ်နှစ်တစ်ယောက်နှုန်းဖြင့် ကလေးယူပါကမိခင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်ပေါ်စေသလို မွေးလာမည့်ကလေးတိုင်းကိုဂရုစိုက်မှု၊ မေတ္တာအပြည့်အဝပေးနိုင် မည်မဟုတ် ပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် အိမ်ထောင်မပြု ခင်နှစ်ဦးသား ကြိုတင်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး ပြော ဆိုပေးထားသင့်သည်။ ထိုသို့သော အမှုကိစ္စတချို့ကို ကြိုတင်ပြုလုပ်ပြီး သေသေချာချာလုပ်ထားပါက အိမ် ထောင်ရေးသာယာမှုရရှိမည့်အပြင် ဘေးဆိုးများမှလည်းကင်းဝေးစေမည်ဟုတထစ်ချယုံကြည်မိပါသောကြောင့် လက် လှမ်းမီသလောက်နှင့် ရေးသား တင်ပြ ပေးလိုက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
Get From >> Popular News
ဟင်းချက်ရာတွင် ထည့်ပြီး ချက်လေ့ရှိသော ရုံးပတီသီးဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရုံးပတီသီး စားလို့ ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေကတော့ ----
- သွေးစီးဆင်းမှုကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။
- အရိုးပါးရောဂါ ကာကွယ်ပါတယ်။
- အရိုးကျီးပေါင်း တက်ခြင်းအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီ Post ကိုရေးချင်တာကြာလှပါပြီ။ဒါပေမဲ. မအားတော. Post တင်ဖို. အချိန်ကြာခဲ.ပါတယ်။ကျွန်တော်.အမြင်နဲ. သူငယ်ချင်း နိုင်ငံရေးခေါင်းနဲ. ရှမ်းပြည်သူလူထုများ ကွဲလွဲခြင်ကွဲ
မှာပါခ။ကျွန်တော် ရေးမယ်. အရေးက ခေတ်အဆက်ဆက်လဲ လေ.လာခဲ.ပါတယ် ပြီးတော. ကျွန်တော်က ရှမ်းသမိုင်းရှင် ပညာရှင်တော.မပာုတ်ပါဘူးး ။ ကိုယ်လေ.လာ လာခဲ.မှန်သမျှထဲက တစ်ခုထဲ က ရှမ်းစည်းလုံးခြင်းအင်အားပါပဲ ။ အခု ကျွန်တော်တို. ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ ပါတီပိုင်းရော တပ်.ပိုင်းရော မကြာသေးခင်မှာပဲ တွေ.ဆုံမူ. Meeting BKK လုပ်ခဲ.ပါတယ်။ဒါပေမဲ. အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်တော. ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ ရှမ်းတပ်.ပိုင်းခေါင်းဆောင်များပိုပို ရင်းနှီးလာတာပေါ. အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်လဲ ပိုပြီးတော. ကောင်းလာတာပေါ.။ဒါပေမဲ. ရှမ်းတွေစည်းလုံးတဲ.နေရာမှာ နည်းနည်းတော. သဘောထား ကွဲလွဲနေပါတယ် (Misunderstand ) ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အရင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ.တဲ. ရှမ်းအချင်းချင်း ပစ်သတ်တာ တကယ်ရင်နာစရာပါပဲ။ အဲထဲက နှစ်ဖက်စလုံး ခေါင်းဆောင်အသုံးမကျလို.ပေါ. ။ အမြင်လဲကျင်းတယ် အသိတရားလဲ နည်းလို.နေမှာပေါ.။အဲထဲကဆိုရင် တစ်ချိန်တုန်းက ကျွန်တော်. အဘိုးက တောင်ပိုင်း (တစ်ချိန်တုန်းက MTA) တပ်.မတော် ကျွန်တော်. အဘိုးညီကမြောက်ပိုင်း
တပ်.မတော် သူတို.နှစ်ယောက်၏ ရည်မှန်းချက်သည် ရှမ်းပြည်ထောင်စု သစ်ကိုတည်ထောင်ဖို. Freedom and Liberation နဲ. ရှမ်းတပ်.မတော်ထဲကို ၀င်လာခဲ.ပါတယ်။နောက်ပိုင်း ကိုယ်.ရန်သူကိုမတိုက်ရပဲနဲ.
ကိုယ်.လူမျိုး (ရှမ်း) အချင်းချင်း ပစ်သတ်ခဲ.ရတာ ပြန်တွေးကြည်.ရင် သမိုင်းမှာ ရင်နာတွေ ရစရာတောင်မရှိတော.ဘူး။ အမေတူအဖေတူပြီး ညီအစ်ကိုယ်အချင်းချင်းပြန်သတ်ဖြတ် ပစ်ရတာ တကယ် ကျွန်တော်တို.ရှမ်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဖက်စလုံး အသုံးမကျလို.ပဲ။ ဒါပေမဲ. အခုလို ကျွန်တော်တို. ရှမ်းခေါင်းဆောင်အမြင်တွေ ကျယ်လာတော. နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များ ပွင်.လင်းမူ.နဲ. အမြင်အမှန်တရားရလာတော. တွေ.ဆုံမူ. လုပ်တယ်ဆိုတာ အရမ်းကောင်းတဲ. Process တစ်ခုပါပဲ။တစ်ချိန်ကြရင် ရှမ်းမိဘပြည်သူများနှင်. အောက်ခြေတပ်.သားများ မျှော်လင်. (Expect) နေတဲ. ရှမ်းတပ်.မတော်များ စည်းလုံးမူ.သည်တစ်နေ.ကြရင်ဖြစ်လာပါမယ်လို.ယုံကြည်ပါတယ်။
အဝေးနဲ.အနီးပေါ.နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အခုရှမ်းခေါင်းဆောင်များ တပ်.ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ စည်းလုံးချင်းသည်လဲ အရေးပါတဲ.အခန်းတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ. BKK မှာရှမ်းတွေ.ဆုံမူ.သည် အရမ်းကောင်းတဲ. တစ်ခုပါပဲ။ ခက်တာက ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်.ဖွဲ. နှစ်ဖွဲ.ကိုတစ်ဖွဲ.ဖြစ်အောင် ပူးပေါင်းဖို.ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ရှမ်းခေါင်းဆောင်များနဲ.နဲ. အခက်တွေ.နေပါတယ်။ရှမ်းတွေစည်းလုံးဖို.ဆိုတာ သူတို.မပာာမိတ်ကို ညှိ.နှိုင်း ရမယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင်.ဘူးလို. ကျွန်တော် ယူဆပါတယ် ။ကျွန်တော်တို.ရှမ်းခေါင်းဆောင်များခေတ်အဆက်ဆက်ကလုပ်ဆောင်လာခဲ.တာ လူများကြားဝင်မူ. လုပ်
ပေးမှ စည်းလုံးတာမပာုတ်ပါဘူး။ကိုယ်.အသိစိတ်နဲ. ကိုယ်.အသိတရားနဲ. စည်းလုံးလာခဲ.တာ။မပာာမိတ်၏
အရေးသည် ဒုတိယ ထားလိုက်ပါ။ရှမ်းလူမျိုး စည်းလုံးဖို.က ပထမ ထားပြီး ပုံတူ တာတွေကိုချမှတ်ပြီး မတူ
တာတွေကို တစ်ချက်ထား အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို. ရှမ်းလက်နက်ကိုင်များ တောထဲဝင်ပြီး လက်နက်ကိုင်
ကြတာ ဘာရည်မှန်းချက်လဲ ။ ရှင်းနေတာပဲ ရည်မှန်းချက်ချင်းက ရှမ်းပြည်လွတ်မြောက်ဖို.ပဲမလား။
ဒီအချိန်ကမစည်းလုံးရင် နောက်တစ်ချိန်ဆိုတာ စည်းလုံးဖို. မစဉ်းစားကြနဲ.တော.။မပာာမိတ်ကဘယ်လောက်ထိအရေးပါနေသလဲ ၊??? တကယ်စစ်ဖြစ်လာရင် ဘယ် မပာာမိတ် ကကျွန်တော်တို.ကို ကူညီခဲ.ဖူးလို.လဲ မပာာမိတ်ဆိုတာ တစ်ဖက်က စစ်ဆင်လာရင် တစ်ဖက်က ကူညီဖို.အဆင်သင်.ပဲ ကျွန်တော်သိတဲ.မပာာမိတ်ဆိုတာက ။ဥပမာ ဂျပန် တောင်ကိုးရီးယား အမေရိကန် သူတို.တွေ မပာာမိတ် တကယ်စစ်မှန်တယ်။သူတို.၏ လုပ်ဆောင်ချက် တွေကို အတုယူစေချင်တယ်။မပာာမိတ်ဆိုတာ ရန်သူက ကိုယ်.ကိုလာတိုက်ရင် မပာာမိတ် သူငယ်ချင်းကောင်း ကတစ်ဖက်ကူညီရမယ်။အခု RCSS/SSA ရော SSPP/SSA ပဲ ။စည်းလုံးဖို.က မပာာမိတ်က အဓိက မပာုတ်ပါဘူး။လူများကိုမအားကိုးနဲ.လူများ ကိုအကောင်းမမြင်နဲ.ကိုယ်.ကိုယ်.လူမျိုးကိုယ်.အချင်းချင်း လေးစား ရိုသေလေးစားပါ။ရှမ်းလူမျိုး ဆိုတာ တကယ် တောင်ပိုင်း မြောက်ပိုင်းစစ်ဖြစ်လာရင် တစ်ဖွဲ. နဲ. တစ်ဖွဲ.က ကူညီဖို.က အဆင်သင်.ဖြစ်စေရမယ် ။ ဒီအတောအတွင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းမစည်းလုံးခဲ.ရင်တောင်။ခေတ်အဆက်ဆက်က ကျင်.သုံးတဲ. စနစ်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။နည်းပညာစနစ်ဆိုတာတစ်နေ.ပြီးတစ်နေ.တိုးတိုးတက်လာတာ။အကုန်ဖျက်ပစ်ပါလို.မဆိုလိုပါဘူး။အဖွဲ.အ
စည်းတိုင်းသည် အဓိက ကသူ. မူ သူ. ပေါ်လစီ ဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ သူ. မူ သူ. ပေါ်လာစီ ကြောင်.နဲ.ရှမ်းတွေ မစည်းလုံးနိုင်တော.ဘူးလား။နူတ်ကအမြဲပြောပြောနေတဲ. စည်းလုံးဖို. စည်းလုံးဖို. ဆိုတာတကယ်လက်တွေ.မှာကော် ကိုယ်ကဘယ်လောက်ထိ လုပ်ဆောင်နေသလဲ။ မပာာမိတ် ကိုပဲအဓိက ထားပြီးမှရှမ်းတွေစည်းလုံးမယ်ဆိုရင်တော. တစ်သက်တောင်မပြောနဲ. နောက်ကျွန်တော်တို. New Generation တွေခေတ်ရောက်ရင်လဲ သဘောထားကွဲလွဲမယ်. အရေးပဲရှိတယ် ဘယ်လိုမှ စည်းလုံးမှာမပာုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်.ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖဲ.တာမပာုတ်ပါဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရင် ဦးနှောင်မရှိဘူး။အမြင်ကျင်းမြောင်းလှပါတယ်။ကိုယ်ကောင်းစားဖို.ပဲသိတယ်။ရှမ်းပြည်သူလူထု အရေးကို တကယ်လုပ်ပေးတာမပာုတ်ပါဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးခေါင်းဆောင်ပါပဲ။မိဘ ပြည်သူက တစ်နေ.ထက်တစ်နေ. ဆင်းဆင်းရဲလာတာ တိုးတက်ဖို.အခွင်.အလမ်းမရှိခဲ.ဘူး။တစ်ချိန်တုန်းက ဘိန်းစိုက်ဖို. SSA တွေပဲ အားပေးခဲ.တယ် အခုကလဲ ဖြတ်ဖို.ဆိုတာလဲသူတို.ပဲ လုပ်နေတာ စိုက်ခိုင်းလဲသူတို. ဖျက်ခိုင်းလဲသူတို.ပဲ ။ကြားထဲက ရှမ်းပြည်သူက တကယ်ခံခဲ.ရတာအမှန်ပဲ။ အခုသူတို. စည်းလုံးဖို.က နံပါတ်တစ် အာဏာဘယ်လိုခွဲသုံးမှာလဲ နံပါတ်နှစ် ဘယ်လိုမူပေါင်နဲ.သွားမှာလဲ နံပါတ်သုံးဘယ်နေရာကိုသွားကြမလဲ ပေါင်းစည်းပြီးသွားရင် အဲဒါတွေပဲအရေးကြီးဆုံး သူတို(ရှမ်းတပ်.ခေါင်းဆောင်များ) ပေါင်းရတာခက်တာက။ အာဏာဆိုတာလဲ တပည်.ရှိမှ ဗိုလ်ဖြစ်တာ အင်အားကြီးမှ အာဏာရှိတာ အောက်ခြေတပ်.သားကို ကိုယ်ချင်းစာပါ။ မူပေါင်ဆိုတာလဲ ရှေ.ရေးကိုကြည်.ပါ အမြင်မကျင်းမြောင်းပါနဲ.။ ပေါင်းစည်းတဲ.နေရာမှာ လူများ (ဗမာအစိုးရ) ကြားဝင်ရင် သတိထား ပြိုကွဲဖို.ပဲ သူတို.ကျွန်တော်တို.ကို လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အမြင်ချင်းမတူရင် တစ်ချိန်တုန်းက ရှမ်းရှမ်းချင်း စစ်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ် လူမျာ လှည်.ကွက်ပေါ်မှာ ငအာ မလုပ်မိ.စေနဲ ။ ပေါင်းစည်း ဆိုတာလဲ ရည်မှန်းချက် မရှိ ပန်းတိုင်မရှိရင်ပေါင်း ပေါင်းမပေါင်းပေါင်း ဘာမှမထူးဘူး။ ပေါင်းစည်းပြီးရင် ကျွန်တော်တို. ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ ဘယ်ဦးတည်ချက်ဘယ်ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကိုသွားကြမလဲ ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို. ရှမ်းလူမျိုး မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ဆိုတာ ဒီထက်အမြင်ကျယ်ပြီး ဒီထက်အမြင်ကောင်း ဒီထက်အသိတရား ရှိဖို.လိုတယ်။အခုလက်ရှိ ရှမ်းခေါင်းဆောင်အရည်အချင်း အသိတရားမရှိဘူးလို. မဆိုလိုပါဘူး။ အသိတရား ရှိခဲ.မယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ.တဲ. တစ်ချိန်တုန်းက ဘာလို. ရှမ်းအချင်းချင်း ပစ်သတ်သေခဲ.ရသလဲ မပာုတ်လား ။ အခုစည်းလုံးဖို.ဆိုတာ မပာာမိတ်ကို အဓိက ရှေ.မထားပါနဲ.လို. ကျွန်တော်ရှမ်းနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်များကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အမှားရေးမိ. မိဘပြည်သူများ နိုင်ငံရေးသမားများ တပ်.ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအပေါင်းတို. အမြင်မတူသဘောထားမကြိုက်ခဲ.မိ.ရင် အားလုံးကျွန်တော် တောင်းပန်ပါသည်။ မိုင်ဆွန်ခ။
>>> Thank You, Come Read and Visit Our Website Again Kha <<<
ꨅ်ꨮထိုင် တီꨳလိꨓ်ꨳꨀိူတ်ꨲ ꨀဝ် ဝꨱင်းေꨀးသီး။ꨟꨮ်ꨳဝꨤꨓ်ꨳꨟဝ်း မိူင်းဝꨱင်းေꨀးသီးꨟဝ်းꨀတ်းယꨱꨓ်ꨳဝꨯးဝꨯးသေꨀမ်း။ꨟꨮ်ꨳပီꨳꨓွင်ꨵ တꨯးꨟဝ်း ꨡꨓ်ပꨱꨓ် ပီꨳပꨱꨓ်ꨓွင်ꨵ ပုꨳ လုင်း ꨟဝ်းꨁဝ်ေꨀုꨳ ꨟꨮ်ꨳယူꨲ လီ ꨁိုꨓ်ꨳယ်ꨮꨲ ꨀူꨳေꨀုꨵ သေꨀမ်း။ပေုးယဝ်ꨵ ꨡꨓ်ယူꨲ ဝꨯꨵ တီꨳေꨀးသီး ပေုꨳꨁုꨳ ꨬ မꨳꨁုꨳေꨀုꨳ။ ꨁုꨳ လုꨀ်ꨳꨅꨤꨯး လုꨀ်ꨵ တီꨳꨓꨯꨳ သေ ꨀꨓ်ꨲ တေုး ပေုꨳꨬ မꨳ ꨅဝ်ꨳသွင် ပုး ယူꨲ
ꨁုꨳ။ပီꨓꨯꨵ ꨡမ်ꨲ လꨯꨳမိူဝ်းꨬ လꨳ ယွꨓ်းꨀꨓ်ꨲ တေုး ꨬ မꨳ တီꨳꨓꨯꨳ ꨀူꨉ်းယဝ်ꨵ ။ပီꨓꨯꨵ ပꨱꨓ် ပွꨯးꨡွꨀ်ꨲ ဝုꨲ ꨕ်ꨮꨕ်ꨮေꨀုꨳꨀꨓ်ꨲ တေုး ပေုꨳ ꨬ မꨳ ꨕ်ꨮ ပေုꨳꨬ မꨳ မꨓ်း ꨁုꨳ တေꨵ ပီꨓꨯꨵ တေ ယွꨓ်း ꨀꨓ်ꨲ တေုး ꨁꨰပ်းꨟꨤင်ꨳ ꨡွꨓ်ꨲ ꨡꨓ် ပုးမုး ꨅွမ်း လုꨀ်ꨳ ꨀူꨉ်းယဝ်ꨵ ꨬ မꨳ။ ꨁုꨳ တေꨵ ꨡမ်ꨲ ပꨱꨓ်မိူဝ်းလꨯꨳယဝ်ꨵ ꨀွပ်ꨳꨓꨯꨬ လꨳ ꨟꨮ်ꨳပေုꨳꨬ မꨳꨁုꨳ ꨅဝ်ꨳသွင်ပုး ယူꨲ လီသေꨀမ်း။
သင်ဝုꨳ ꨁုꨳ ꨅꨤꨯး လꨯꨳꨟꨱတ်းꨕိတ်ꨳ ဝုꨳꨕိတ်း လꨯꨳꨟꨱတ်းပူꨓ်ꨵ တေုꨳ ပေုꨳ တꨤင်းꨬ မꨳ ꨁꨰꨓ်းတေုꨲ ပွတ်ꨲ ဝꨮꨤင်းꨁꨮꨤင်းပꨓ်ꨁုꨳ သေꨀမ်းꨁုꨳ ။ ꨅꨤꨯးတေꨀꨮုꨲ လ်ꨮꨳ ပꨯꨳလ်ꨮꨳေꨀုꨳ တေꨡမ်ꨲ လိုမ်း ꨀုင်ꨳပေုꨳ ꨁုꨳꨬ လꨳ ꨬ မꨳꨁုꨳ ။ꨕွမ်းꨅꨤꨯး
မုးမီးတီꨳ မိူင်းꨀꨯ မုးတူꨀ်းဝꨯꨵ ယူꨲ တီꨳ ꨓိူဝ်လွꨯ ။ ꨁုꨳလုꨀ်ꨳေꨀုꨳ တေယွꨓ်းသူး ပꨓ်ပေုꨳ တꨤင်းꨬ မꨳ ꨁုꨳ ꨟꨮ်ꨳယူꨲ လီ
ꨀိꨓ်ဝꨤꨓ်သေꨀမ်း။ မိူဝ်ꨳလꨱꨀ်ꨵ တေုꨲ ထိုင် မိူဝ်ꨳလꨱဝ် ပေု ꨳ ꨁု ꨳ ꨬ မꨳ ꨁုꨳ လꨯꨳသွꨓ်ပꨓ် ပꨤꨯးပင်ꨲ ꨉုꨲ ꨀူꨳလွင်ꨳလွင်ꨳ တꨤင်း ꨟူꨵ တꨤင်းꨟꨓ် ꨀူꨳꨡꨓ်ꨡꨓ် တေု ထိုင် လုꨀ်ꨳ လꨯꨳယူꨲ သဝ်းလီꨬ လꨳ မီးတꨤင်းꨟူꨵ တꨤင်းꨟꨓ်မုး ꨁုꨳလုꨀ်ꨳေꨀုꨳ
ပꨱꨓ်ꨡꨓ် ငိꨓ်းꨅူမ်းꨬ လꨳ တေꨡမ်ꨲ မီးဝꨓ်းလိုမ်း ꨀုင်ꨳပေု ꨳ ꨬ မꨳ ꨬ လꨳ ပွꨯးꨡွꨀ်ꨲ ဝုꨲ ꨀꨓ်ꨲ တေုး ꨀူꨳပီပီ ꨁုꨳ။
ꨬꨁုꨳ တꨰမ်ꨳလိꨀ်ꨳ သူင်ထိုင် ꨬ မꨳꨡမ်ꨲ လꨯꨳꨟꨓ် ꨡမ်ꨲ လꨯꨳလူေꨀုꨳ ။ꨀူꨓ်းꨡꨓ်ꨟဝ်းပꨱꨓ် ပီꨳꨓွင်ꨵ ꨀꨓ် ꨀူꨓ်းမိူင်းလꨱဝ်
ꨀꨓ် ꨡꨓ်ပꨱꨓ် ꨀူꨓ်းေꨀးသီး ꨁဝ်ေꨀုꨳ တေꨟူꨵ တေꨟꨓ်ꨬ လꨳ တေမွꨀ်ꨲ လꨤတ်ꨳ ꨬ ꨓꨳ ꨬ မꨳ ꨟဝ်းယူꨲ ꨁုꨳ ယဝ်ꨵ ။ꨕ်ꨮ
ေꨀုꨳ ယဝ်ꨵ ꨟꨮ်ꨳမေု ꨟꨀ်ꨵ ပေုꨳ တꨤင်း ꨬ မꨳ သေꨀမ်း မ်ꨮꨲ သုင်ꨁုꨳ ။
>>> Thank You, You are reading my proposition 4my parent <<<
12:07 AMNOTE BOOK
The final day of Buddhist Lent falls on the 8th day of the 11th waxing moon. This day marks the end of the three months Rains-retreat known as ‘Buddhist Lent’ in which monks had earnestly dedicated themselves to the study of Buddhist scriptures and meditation practice. The Tipitaka mentions this as the day the Buddha, on His seventh Buddhist Lent, returned to Earth from His three-month stay in Tavatimsa Heaven (second level of heaven) where He preached the Higher Doctrine to His mother and other celestial beings. His mother who passed away seven days after giving birth to Prince Siddhattha would descend from her residence in Dusita Heaven (fourth level of heaven) to have an audience with the Buddha.
The end of Buddhist Lent day signifies the final night monks must remain in the same temple or dwelling they’ve stayed throughout the past three months. After this day, monks are permitted to travel and to stay at any other suitable location.
The end of Buddhist Lent day, also called “Poi Auk Wa or Maha Pavarana Day,” happens to beaBuddhist holy day where the practice of Pavarana, or making resolutions, is performed. This practice allows fellow monks the opportunity to approach one another and atone for an offense he may have committed during the Rains-retreat.
The day is considered one of the holiest days for lay Buddhists as well. On this day, they traditionally attend the temple to offer donations, observe the moral disciplines, and listen to Dhamma lecture. In addition, an alms-giving ceremony called “Poi Lu Khao” is conducted on this day. Happy Poi Auk Wa!
Thank you , Came again kha.
Federalism စနစ်ကိုလက်မခံရင် ပြည်ထောင်စုထဲမှ ဗမာ ထွက်သွားပါ
ဗမာတွေ တန်းတူ မနေ ချင်ဘူးဆိုလျှင် ပြည်ထောင်စုက နေထွက်ကြပါ/ မတားပါဘူး။ ကျုပ်တို့ တိုင်းရင်းသား တွေ က ဘယ်သူ့အထက် မှာ မှ မနေချင် သလို ဘယ်သူ့အောက် မှာ မှ လည်း မနေနိုင်ပါ။ ဒီတော့ တန်းတူရေး အတွက် တိုက်ပွဲ ဝင် လာတာ မောပြီကွ။ ဒီတော့ ဗမာ တွေ ဆက် ပြီး အပေါ်စီး မှာ ပဲ နေချင်တယ် တန်းတူ လည်း မနေချင်ဘူး ပြည်ထောင်စု ကနေလည်း မထွက်သွားဘူး ဆို လျှင် ကျုပ်တို့က ခွဲထွက်ရလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဗမာ တွေခွဲထွက်သွားလျှင်ကျုပ်တို့တိုင်းရင်းသား တွေလည်းပိတ်ပင်တားဆီးမှာမဟုတ် ဘူး/တားမြစ်ပိတ်ပင်ခွင့်လည်းလုံးဝလုံးဝ မရှိသလို ဗမာ တွေ လည်း ကျုပ်တို့ ခွဲထွက် မယ် ဆိုလျှင် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခွင့်လုံးဝလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာဗမာတိုင်းတိုင်းရင်းသားတိုင်းသဘောပေါက်ထားဖို့တော့လိုတယ်။ပြည်ထောင်စု ထားတာဟာ တန်းတူနေဖို့ နဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကူညီဖို့သာဖြစ်တယ်။ လူများ အင်အားကြီးသူတွေ ရဲ့ အောက်မှာ နေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ပင်လုံမှာ Agreement မှာလုပ်လာခဲ.တာ လုံးဝဗမာလူမျိုးရုတ် အောက်နေဖို.ဆိုတာ လုံးဝ မပါဘူး။အဲကြောင်. ဗမာအစိုးရ Federalism ကိုလက်မခံရင် တိုင်းရင်းသားအနေနဲ.တော. လက်နက်ကိုင်တဲ. လမ်းစဉ်ကို ပဲပြန်ရွှေးချယ် ဖု.ိပဲရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာ Nationwide Ceasefire လုပ်ဖို. နီးလာလေ အစိုးရ ဗမာအစိုးရ က တိုင်းရင်းသား
နယ်မြေတွေကို စစ်ဆင်နေတာပာာ ဘာသဘောလဲ ။ ယုံကြည်စရာကိုမရှိတာခွေးအစိုးရ တပ်.မတော်ကို။နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်မှာ တိုင်းရင်းသားခံ ခဲ.ရတာတွေပဲအဲထဲက ရှမ်းလူမျိုးက အခံရဆုံးပဲ။
ဒီလိုနဲ.တာ ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော. လူတွေ ၊ အဖွဲ.အစည်း တိုင်းရင်းသားတိုင်း Expect နေတဲ. Nationwide Ceasefire ဆိုတာဖြစ်လာဖို. ရှိလာမယ်. အစီအစဉ်မရှိနိုင်ဘူး။မကြာသေးခင် President ဦးသိန်းစိန် မိန်.ခွန်းထဲမှာ အပစ်အခတ်လုံးဝ မလုပ်နိုင်ရင် ဘယ်တော.မှ Election မကျင်းပဘူးလို.။သူ.မိန်.ခွန်းထဲမှာပါပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲပဲ အစိုးရက Federalism စနစ်ကိုလက်ခံတော်လဲ ဒါပေမဲ. လက်တွေ.မှာတခြားစီဖြစ်နေပါတယ်။ မကြာမိ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်နိုင်ဖို. လုပ်နေတဲ.အချိန်မှာ အစိုးရကရှမ်းတပ်မတော်မြောက်ပိုင်း(SSPP/SSA)ကိုထိုးစစ်တာပာာဘယ်သူက ငြိမ်းချမ်းမူ.ကိုမလိုလားသလဲဆို
တာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မြင်နေကြပြီပဲ။တိုင်းရင်းသား တောင်းဆိုလာတဲ. Federalism ဆိုတာလဲ ဘာမှ ဗမာလူမျိုးအတွက် ဆုံးရှူံးမူ. မရှိဘူးလို.ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။သူတို. အာဏာစွန်.လွင်လိုက်ရမှာကိုကြောက်လို.လား။ဒါမှမပာုတ် ခေတ်အဆက်ဆက်က အာဏာရူး သမားပဲလုပ်ချင်သလား။တိုင်းရင်းသားတိုင်းတောင်းဆိုနေတာ Federalism ပါပဲ။ဒို.တာဝန်အရေး သုံးပါးကိုလဲ တိုင်းရင်းသားကမချိုးဖောက်ဘူး။ဗမာအစိုးရတာ ချိုးဖောက်တာ Federal လက်မခံရင် ခွဲထွက်ဖို.ပဲ တိုင်းရင်းသားကပြန် ကျင်.သုံးပြီးလက်နက်ကိုင် တော်လှန် ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပဲ ပြန်ကျင်.သုံးရမှာ။
Federalism စနစ်သည် ပြည်ထောင်စု ထဲကနေခွဲထွက်ဖို.မပာုတ်ဘူး Power Sharing သဘောပဲ။ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းရင်းသားတောင်းဆိုနေတဲ. Freedom and liberation ကတာ ခွဲထွက်ဖို.ပဲ။ Federal လက်မခံရင် ပြည်ထောင်စုထဲကနေ ဗမာအစိုးရ ထွက်သွားတာ လုံးဝ မတားပါဘူး။တိုင်းရင်းသားတိုင်းပဲ ဗမာဆိုတာ အလိုမရှိဘူး။ပြည်ထောင်စု ကြီးဆိုတာ တစ်ဦးပဲပိုင် တစ်ဦးပဲ အုပ်ချုပ်တဲ. စနစ်မှမပာုတ်တာ။အခုအစိုးရ လုပ်ဆောင်နေတဲ. အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲ. ရေးသည် လုံးဝ လုံးဝ ထိထိရောက်ရောက် တပ်မတော်ဖက်က မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ.ပါဘူး။ Federalism ကိုအစိုးရ ကျင်.သုံးပေးမှာလားဒါမှမပာုတ်အစိုးရကတိုင်းရင်းသားအတွက်လွတ်လပ်တဲ. နိုင်ငံသစ်တစ်ခုပေးထောင်မလားဆိုတာ
သေချာစဉ်းစားပါဒီတိုင်းပဲ ခေတ်အဆက်ဆက်အာဏာရူးနေရင် ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ ပြီးဆုံးနိုင်မှာမပာုတ်ပါ။
>>> Thank you, Come visit and read again kha <<<
ဗမာလူမျိုးပါမှ ရှမ်းက စည်းလုံးမှာလား ခေါင်းဆောင်သို. . .
အခုလို ဘန်ကောက် မှာရှမ်းခေါင်းဆောင်များတွေ့ဆုံနေတဲ့နေရာမှာ ဗမာလူမျိုးမပါဝင်စေချင်ဘူး။ဗမာပါမှ ငါတို့ရှမ်းစည်းလုံးမှာလားကွာ ဦးအောင်မင်းအဖွင့်စကားတက်လာပြောတယ်ဆိုကတဲ့က လုပ်ပုံကိုကမဟုတ်တော့ဘူး။ရန်သူကို မိတ်ဆွေစစ်မသတ်မှတ်ပါနဲ့ မှားသွား လိမ့်မယ်။ ရှမ်းအချင်းချင်း မစည်းလုံးအောင် လုပ်လာတာ ဗမာပဲ ရှမ်းတောင်နဲ.မြောက် ရှမ်းအချင်းချင်းစစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာ တစ်ရက်ခံ ကဘယ်သူလဲ ဘယ်သူကမီးမောင်းထိုးပြသလဲ ဒီနေ.အချိန်ထိပဲသမိုင်းမှာ ရှမ်းအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကြတယ်ဆိုတာ မှတ်တမ်းမှာ ပြည်သူနားထဲ စိတ်ထဲဝင်သွား ပြီအဲဒါဘယ်သူလုပ်သလဲ ဗမာအစိုးရပဲလုပ်တာကွာ။ ရှမ်းတောင်နဲ. ၀ တုန်းကလဲ ထိုနည်းပဲ ဘယ်သူလုပ်သလဲ ဗမာကပဲလုပ်တာ ရှမ်းပြည်နယ်သား ရှမ်းတပ်မတော် တွေ တစ်စုတစ်စည်းထဲ စည်းလုံးဖို.က ဗမာအစိုးရ လုံးဝ ပါဝင်စရာမလိုဘူး။ရှမ်းလူမျိုးရှမ်းပဲဦးဆောင်ဗမာကိုအဖေတော်ပြီ ခေါ်လာစရာမလိုဘူး။လုပ်ပုံကမှားကိုမှားတယ်
ဖဲ.တာမပာုတ်ဘူး ပြင်စေချင်လို.။ဘန်ကောက်မှ တွေ.ဆုံမူ.သည် ရှမ်းလူမျိုးတွေရှမ်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ တွေ.ဆုံကြတယ်လို.ပြောတာ ၀မ်းသလွန်းလို. မျက်ရည်တောင်ကျတယ်တစ်နေ.ကြရင်ရှမ်းတွေစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ. နိုင်ငံသစ်တစ်ခုတည်ထောင်နိုင်တော.မယ် ပြည်သူလူထု လိုချင်နေကြတဲ. စည်းလုံးမူ. အင်အားဆိုတာ မကြာမိဖြစ်လာတော.မည်လို. အလင်းရောင်ထွက်
လာပြီလို. ကျွန်တော်စ်ိတ်ထဲပျော်ခဲ.ရတယ် ကယ်တွေ.ဆုံမူ.အစမှာပဲ ဦးအောင်မင်းက တက်လာ ပြီး အဖွင်.စကားပြောတယ်မှတော. စိတ်ထဲကပာာတွေက မျှော်လင်.ထားတာတွေ စိတ်ပျက်သွားမိ.တယ်။ အလင်းရောင်ထွက်လာပြီလို. ကြည်.လိုက်တော. ထွက်လာတဲ. အလင်းက လပုတ်လစုတ် မောင်မဲသွားတော.တာပဲ။ ရှမ်းတွေစည်းလုံးဖို. ဗမာတွေက ရှမ်းခေါင်းဆောင်အတွက် ရှမ်းပြည်အတွက် အရေးပါလို.လဲခ ဗမာလူမျိုး ဗမာအစိုးရ ပါစရာမလိုဘူး။ရှမ်းပြည်အရေ မှာဗမာလူမျိုး ဗမာအစိုးရပါရလောက်အောင် ရှမ်းတွေက အမျှော်အမြင်သေးလို.လား။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဘန်ကောက် တွေ.ဆုံမူ.ပာာ ဘာမှ ပြည်သူလူထုအတွက် အကြိုးရှိမည်မပာုတ် ။ရှမ်းတွေစည်းလုံးဖို. ဆိုပြီး ပင်လုံမှာ ဗိုလ်ချုပ် ဘယ်လိုလုပ်ချ သွားသလဲဆိုတာ။သမိုင်းကိုသေချာလေ.လာ သမိုင်းအမှန်ကိုလိုက်ရှာဖတ် ကိုယ်သိသလောက် ကိုယ်.အတွက် တန်ဖိုးပဲ။ပင်လုံမှာရှမ်းတွေတော်တော် ခံသွားပြီ နောက်ထပ် အဲလိုအဖြစ်ခံအုံးမှာလား ဗမာပါမှ ရှမ်းတွေ စည်းလုံးမှာလား ခေတ်အဆက်ဆက်
ပဲ ဗမာအစိုးရ ဗမာဘုရာတွေက ရှမ်းလူမျိုး စော်ဘွား တောင်တန်းတိုင်းရင်းသားတွေကို ပြိုကွဲ
အောင် သူတို.လုပ်တာ။ရှမ်းပြည်သားအချင်းချင်းရန်ဖြစ်အောင်လဲသူတို.ပဲလုပ်တာ။သေချာစဉ်းစားကြည်.ပါ ရှမ်းခေါင်းဆောင်အပေါင်းများခင်ဗျာ။
>>> Thank you, Come read and visit again kha <<<